Waaxda Cashuuraha Berriga Wasaaradda Maaliyadda Oo Sheegay In Uu Kordhay Dakhliga Ay Soo Saareen | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Waaxda Cashuuraha Berriga Wasaaradda Maaliyadda Oo Sheegay In Uu Kordhay Dakhliga Ay Soo Saareen
Hargaysa (SWO): Wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa sheegtay in uu kordhay sanadkan dakhliga cashuuraha bariga, isla markaana ay rejaynayaan in uu sii kordho.
Agaasimaha waaxda cashuuraha bariga ee wasaarada maaliyadda Maxamed Xasan Saleebaan iyo agaasime ku xigeenka waaxda cashuuraha bariga Axmed Maxamed Muxumed, oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arrintaasi.
Waxaanay ka warameen habka cashuur ururinta iyo kormeereyaal cusub oo loogu talo galay in ay soo kormeeraan ganacsatada goobaha dakhliga cashuuraha bariga.
Maxamed Xasan Saleebaan agaasimaha waaxda cashuuraha bariga waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay mudadii uu xilka hayay, isagoo tilmaamay in ay hirgeliyeen nidaamkii cashuuraha bariga.
Waxaanu yidhi “Waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah hirgelinta nidaamkii cashuuraha bariga iyo qaabka loola macaamilayo dadka cashuuraha bixinaya iyo abuurista kooxo kormeera. Waxa kaloo aanu kor u qaadnay cashuuro la bixin jirin oo hooseeyay oo heerka cashuur bixinta ka hooseeyay, sida cashuurta shaqaalaha cashuurta kabista iyo cashuurta daaraha.
Waxa kaloo jirta dakhiliga cashuuraha berriga marka aynu u eegno sanadkii hore waxa uu kordhay boqol kiiba shan iyo toban 15% marka loo eego sanadkii hore.
Waana bilaw waxaananu rejaynaynaa in bil walba uu sii kordhi doono dakhliga naga soo gala cashuuraha bariga”.
Sidoo kale agaasime ku xigeenka waaxda cashuuraha berriga Axmed Maxamed Muxumed, ayaa isna waxa uu sheegay in cashuurtii ku waajibtay qof kastoo reer Somaliland oo dakhli soo gallo in uu iska bixiyo.
“Qof kastoo reer Somaliland oo dakhli soo galo si kasta ha ku soo gasho cashuur ayaa ku waajibaysa ama mid ganacsi ayaa ku waajibaysa ama mid shaqaale ayaa ku waajibaysa, ama kala wareejin ayaa ku waajibaysa.
Mar haddii ay wax soo galaan cashuur ayaa ku waajibaysa” ayuu yidhi Axmed Maxamed Muxumed.